Mpanamboatra Minibar fanosotra - Mpamatsy sy orinasa mpanadio ao Shina
Ny bar Mini mihazakazaka mihazakazaka dia tsy hisy fiantraikany amin'ny torimasonao ary tsy mila miala eo am-pandriana na fandriana fotsiny ianao mba hahatratrarana sakafo na zava-pisotro. mitazona ny sakafo sy zava-pisotro ho madio sy mangatsiaka tsy mila mampiasa vata fampangatsiahana varotra. Noho ny lanjany maivana dia azo afindra amin'ny faritra hafa izy io na aiza na aiza no itakiana zava-pisotro mangatsiaka, eny fa na ny Garden. Ny varavarana Crystal Clear an'ny bara kely dia ahafahanao mahita foana ny tahirinao amin'ireo zavatra tsara.
GW / NW: 17 / 15.5
Glass Door Hotel sy trano dia mampiasa Mini Beverage fridge M-25T
Ny kalitao, ny vidiny, ny famolavolana ary ny filaminana no teny lehibe ao amin'ny hotely baran'ny MDE.
Ireo bar mini vata fampangatsiahana dia napetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na birao.
GW / NW: 16.5 / 15kgs Fahafahana
Ny MDE 30L Lockable Minibar, natao manokana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny hotely, dia mampiditra ny teknolojia fitrohana, manome fandidiana mangina ary fanjifana angovo ambany. Tena mahomby satria manome isa angovo A +
Efitra fandraisam-bahiny kely Minibar mampiseho vata fampangatsiahana misy M-40A tsy miankina amin'ny hidin-trano
Ny bar Reinn Mini dia manome mari-pana mangatsiaka mahatratra 5 ° C ka hatramin'ny 8 ° C. Mety amin'ny fitehirizana zava-pisotro sy tsakitsaky, ity vata fampangatsiahana kely 40 litatra ity dia manana hetsika mihazakazaka mangina tanteraka.
lafiny ivelany: W400 x D440 x H570mm
GW / NW: 18 / 16.5
Hotel No No Absorption Mini Bar Fridge tsy misy Compressor M-40T
Ny vata fampangatsiahana bar mini mangina dia noforonina sy amboarina hampiasaina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ireo bara kely dia azo alaina amin'ny modely mafy sy fitaratra eo anoloan'ny fitaratra ary amin'ny habe sy habe samihafa (amin'ny litera). Vita amin'ny rafitra mangatsiatsiaka compressor tena mangina sy mahomby ary rafitra fitsitsiana angovo manokana, ireo bar mini ireo dia afaka mamorona tontolo matory tsara nefa miaraka amin'ny vola kely amin'ny fandidiana.
GW / NW: 19 / 17.5
tantera-drano Cash Box , Small Size Hotel Safes Ary Boxes Safe petra-bola , Electronic Office Safe Box , Small tondro Safe , Hafanàm-po an Key Safe Box , manasa-Ny Mpitarika Mini Bar Fa Hotel Room , trano rehetra Products